War မှာစစ်ဆင်နေတဲ့ Operating Systems - လူအားလုံးကိုဆန့်ကျင်မှုရှိစေရန်ဂရုစိုက်ပါ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 14/06/2020 15:12 | အတော်ကြာ
ယနေ့, လက်ရှိ «Sistemas Operativos» အားလုံးအထက် «Windows» ၎င်းတို့သည်အခြားသူများ၏အကောင်းဆုံးကိုသိမ်းသွင်းရန်နှင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတင်ပို့ရန်အတွက်ပွင့်လင်းစွာပြိုင်ပွဲဝင်နေကြသည်။ လက်ရှိအချိန်မှာ «Microsoft»၏ကုမ္ပဏီ Redmond, USAပိုင်ရှင် «Windows», သူ့ကိုယ်ပိုင်စေရန်, ၏အကြီးဆုံးစျေးကွက်ဝေစုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, သစ်နှင့်အံ့သြစရာ Non- ရိုးရာနည်းဗျူဟာများနှင့်အတူအောင်မြင်ခဲ့သည် «Sistemas Operativos» de ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ဒီအဘို့အရယူ 2019 ၏ပထမတစ်ဝက် တစ် ဦး ထက်ပိုစုဆောင်းရန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည် 80% ၎င်း။
«Windows» ယခုမူကား၊ စစ် «MacOS» y «GNU/Linux»သို့မဟုတ် «Android» y «iOS»သူတို့ကိုချစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုမေးသင့်သည်မှာ ဤအရာများကိုသတ်ပစ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာများထဲမှတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ပါ။
1 စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများ - Microsoft အားသွင်းသည်
1.1 Linux ကို
1.2 Android နှင့် iOS
2 စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများ - GNU / Linux ကိုတန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများ - Microsoft အားသွင်းသည်
အကယ်စင်စစ်အချို့အသုံးပြုသူများသည် «MacOS» အားလုံးအထက် «GNU/Linux», ဆန့်ကျင်လိမ့်မည်, နှင့်မျက်နှာသာအတွက်အခြားသူများ။ အနည်းဆုံးကျယ်ပြန့်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့ကမ္ဘာမှာငါထင်တယ် «Linux» နှင့်၎င်း၏အများအပြားမျိုးကွဲအများစုဆန့်ကျင်, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး, တ ဦး တည်းအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည် မယုံကြည်မှုအနေအထား ၏ထုတ်ကုန်မှလေးစားမှုနှင့်အတူ «Microsoft» သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် GAFAM ငါတို့အကြောင်းကို «Linux»သူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင့် အသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏အလွဲသုံးစားမှု.
၏ရှုထောင့်, ရေတွက်မဟုတ်ပါဘူး «Telemetría, Spyware y Adware» သို့မဟုတ်သူတို့ကိုများသောအားဖြင့်တွေ့ရှိရသောအားနည်းချက်များကို။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အခြားသူများတွင်တွေ့နိုင်သည့်အရာများသောအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ထိရောက်စွာနှင့်ထိရောက်စွာဖြေရှင်းခြင်းမရှိကြပါ «Linux».
«Windows» တင်သွင်း (ထည့်သွင်း) ခဲ့သည်မသာ «Kernel» (Terminal/Comandos) de «Linux» အတွင်း၌ကားမိမိအတွင်း၊ webshopယခု download ၏ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (Distros) ပြီးပြည့်စုံသောနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့။
ထို့အပြင်ပါကတဖြည်းဖြည်းထည့်သွင်း «Ecosistema Linux» ဥပမာအပလီကေးရှင်းများ - «SQL Server, .Net, Visual Studio Code y Skype»။ မကြာခင်မှာပဲသူကသူ့ကိုထည့်သွင်းဖို့ကတိပေးခဲ့သည် «Navegador Edge»အဆိုပါ «Antivirus Defender»။ ဘယ်သူသိလဲရုတ်တရက်သူနဲ့လူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ် «Suite ofimática MS Office» Linux အတွက်
Android နှင့် iOS
ရန်အဖြစ် «Android» y «iOS», «Microsoft» ဆိုပါတယ်၏အသုံးပြုသူများမှမရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ «Sistemas Operativos» မိုဘိုင်းကိရိယာများ အန်းဒရွိုက် y iOS ကို:
Word, Excel နဲ့ PowerPoint
Outlook၊ OneNote နှင့် OneDrive
Skype၊ Office Lens၊ Yammer၊ Delve၊ အဖွဲ့များနှင့် Stream
မသန်စွမ်း «MacOS», «Microsoft» ၎င်းတွင်အောက်ပါ application များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် -
စကားလုံး, Excel နှင့် PowerPoint
အလားအလာ OneNote နှင့် OneDrive
အသင်းများ Skype နှင့် အဝေးမှ desktop
အခြား: Microsoft AutoUpdate, Defender ATP၊ ယခုမှာ Edge ၏ beta version ကိုစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများ - GNU / Linux ကိုတန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်း
အမှန်တရားကတော့ကြာပြီ၊ «Comunidad del Software Libre y Abierto» အဆိုပါကျူးကျော်ခဲ့သည် «Ecosistema Privativo y Cerrado» သူတို့အားရရှိနိုင်အောင်, များစွာသော applications များနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာစနစ်များ ရိုးရာနှင့်စီးပွားဖြစ်အိုင်တီဖြေရှင်းချက် installable နှင့်အသုံးဝင်သောနှစ်ခုလုံး၌၎င်းကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ကျနော်တို့ကဒီဆောင်းပါးမှာသူတို့ကိုစာရင်းပြုစုတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအရမ်းများလွန်းပြီးဒီအကြောင်းကိုသူတို့အကြောင်းအများကြီးရေးထားပြီးသားပါ ဘ‌‌လော့ခ် နှင့်များစွာသောအခြား။
သို့သော် အကယ်၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိသည်ဆိုသောအချက်ကိုပြောသင့်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သိရှိရန်၊ အသုံးပြုရန်နှင့်မျှဝေရန်ရှာဖွေခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီး၎င်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည် «Microsoft» ငါတို့ကျူးကျော် «Ecosistemas Libre y Abierto» မည်သည့်ကုဒ်များသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အဆင်မပြေသို့မဟုတ်ညင်ညင်သာသာမဟုတ်ကြောင်းမည်သူသိသည်နှင့်၎င်း၏ application များပါ ၀ င်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူအပြုအမူအပြောင်းအလဲများသည်ရရှိနိုင်သည့်နည်းပညာများ၊ စျေးကွက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုမှန်ကန်စွာပြောနိုင်သည် ပလက်ဖောင်းအိုင်တီဖြေရှင်းချက်။ ထို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ «Sistemas Operativos» Desktop ကွန်ပျူတာများနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအသုံးပြုသူများ၊ «Microsoft» အတွေ့အကြုံတစ်ခုတည်းတွင်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်စိတ်အားထက်သန်သည်။
ဆိုလိုတာကဒီကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး Multipolar IT world (သို့) မတူကွဲပြားသော IT ဂေဟစနစ် အဓိကအားဖြင့်မှီခိုနေရခြင်း (သို့) ယင်း၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့်လွှမ်းမိုးထားသည့်အများစုလွှမ်းမိုးထားသည့်ဗဟိုအချက်အချာနေရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ရုန်းကန်နေရခြင်းကိုသာရင်ဆိုင်နိုင်သည် «Comunidad del Software Libre y Abierto» ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာနှင့်များပြားလာသောအသုံးပြုမှုကိုဆွဲဆောင်သောကမ်းလှမ်းမှုများကြောင့်သွေးဆောင်ခြင်းခံရမည်မဟုတ် အိုင်တီဖြေရှင်းချက် «Microsoft» အပေါ် «Linux»အဓိကအားဖြင့်။
မျှော်လင့်ဘာပေါ်မှာဤနည်းနည်းရောင်ပြန်ဟပ်မှု မလုံခြုံနှင့် / သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေကဘာလဲ «Microsoft» နှင့်၎င်း၏ applications များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျူးကျော် «Ecosistema Libre y Abierto» de «GNU/Linux» ဆက်လက်တည်ရှိသည် အားလုံးအပေါ်နိုးစက်ထား။ တနည်းမဟုတ်တစ်နည်းဆိုရသော်သူတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းများသည် Telemetry, Spyware နှင့် Adware တို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောမည်သည့်အရာမျှမယူဆောင်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်သို့မဟုတ်သံသယဝင်ကြသည်။
ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည် ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအက်ပလီကေးရှင်းများ Que «Microsoft» ငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းနေတယ် သင်၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုအမြဲသံသယဖြင့်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် အဲဒါအတွက်ကြောင့် လွတ်လပ်မှုကဖြန့်ဝေသည် «Software Libre y Abierto». «GNU/Linux»ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းသည်အမြဲတမ်းလျှောက်လွှာနှင့်စနစ်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကတည်းက «Microsoft», ဒါပေမယ့် «Software Libre y Abierto» o «GNU/Linux» သူ့မှာကတ်ပြားမရှိဘူး၊ သူတို့သိတယ်။
၏နောက်ဆုံးသောနှင့်အနည်းဆုံး, ၏ website တွင် အသားတင်စျေးကွက်ဝေစု သငျသညျပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်တွေ့နိုင်ပါသည် အကြားစျေးကွက်ရှယ်ယာများ၏စာရင်းဇယား «Sistemas Operativos» အခြားအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များအကြားလက်ရှိ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » War မှာစစ်ဆင်နေတဲ့ Operating Systems - လူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့မိုက်ကရိုဆော့ဖ်!
2% မှအနည်းငယ်သို့မဟုတ် PC linux ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုသော 1,39% သို့ရောက်သောအခါ Microsoft သည်လူများစွာကိုလှည့်စားနေသည်။
Christian Herrera ဟုသူကပြောသည်
ပြီးတော့သင်ရေးဖို့သင်ငွေရသလား Linux ဟာကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများမှာဆာဗာများပေါ်တွင်ရှိခဲ့ရင်သိသိသာသာရှယ်ယာများမရရှိခဲ့ဘူး။ Office အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအရ Microsoft Office သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Cristhian Herrera သို့ပြန်ပြောပါ
Ms Office သည်ကောင်းသော်လည်းလူတိုင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်၊ မြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကဲ့သို့သောအခြားအရေးကြီးသောအချက်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံးကိုအသုံးပြုကြသည်။ ငါ LibreOffice ကိုသုံးပြီးချစ်တယ်
ဟုတ်ပါတယ်၊ Windows ပေါ်တွင် GNU / Linux Distros ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူများစွာကိုကျောက်တုံးတစ်တုံးဖြင့်ငှက်နှစ်ကောင်ကိုသတ်ရန်သွေးဆောင်ခြင်းကိုသေချာသည်။ 🙁
MS Office သည် Linux ၏ဂေဟစနစ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသောကြောင့်၊ ပရိုဂရမ်တွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုသည်အခမဲ့ GNU အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပြီးဆုံးသွားပုံရသည်။ MS သည်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်အတူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလွှဲပြောင်းယူလိုက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး၊
Frank Davila ကိုပြန်ပြောပါ
.NET တွင် .NET ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကိုကြိုဆိုသည်။ တစ်နေ့နေ့မှာ Microsoft Office ဟာ Linux ကိုလာမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ suite တစ်ခုပါ။
Felix Manuel အားပြန်ပြောပါ
မကောင်းဘူးမဟုတ်ပေမယ့် LibreOffice ကိုတိုးတက်စေမယ့်ကုဒ်ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါကသူတို့အဘို့ကိုလိုက်နာရန်စံပြပါလိမ့်မယ်!
Mephisto Feles ဟုသူကပြောသည်
GNU / Linux (ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် Debian 10) ကိုပူပြင်းခြောက်သွေ့သောသဲကန္တာရအလယ်တွင်သင်အားစိုက်ထုတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေး၊ သုခချမ်းသာနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအေးချမ်းသာယာခြင်းနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည့်အိုအေစစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် ထွက်ခွာရန်။
Mephisto Feles ကိုပြန်ပြောပါ
Toni CG ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
"တိုက်ခိုက်ခြင်း" အစားစီမံကိန်းနှစ်ခုလုံးတွင်သင်ပူးပေါင်းနိုင်သည်။ ထိုအသိပညာကိုလူတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
Toni CG သို့စာပြန်ပါ
မနက်ဖြန်မနက် (ဒီမှာအမေရိက) ငါကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ ပထမဆုံး Ubuntu ကို Windows မှာ install လုပ်မယ်။ Microsoft Store မှ။ အဲ့ဒါကကျွန်တော့်ကိုမယုံဘူး ငါမသိဘူး။ Virtual Machine တွင်မရှိခြင်း။ <:
မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်လို့အဆင်ပြေမယ်၊ ဒါပေမဲ့အဖြစ်အပျက်တခုခု (သို့) သတင်းတခုခုကိုမင်းတို့ကိုပြောပြမယ်လို့ငါထင်တယ်။
တကယ်တော့သူက Linux အတွက် Windows subsystem ကို install လုပ်တဲ့ operating system တစ်ခုလုံးမဟုတ်ပေမယ့် Bash, Git, APT, DPKG, SSH ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
၎င်းသည် packages များရှာဖွေရန် terminal, git, apt စသည်တို့ကိုအသုံးပြုသည်။ Packages များတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သော dpkg စသည်တို့နှင့်ဆာဗာများသို့အဝေးမှဝင်ရောက်ရန်အခြား terminal တစ်ခုဖြစ်သည့် ssh ကိုအသုံးပြုသည်။
Linux 5.4 rc7 - kernel အသစ်အတွက်ဘာအသစ်လဲ